‘सिएमसी’ बाट ४ लाखलाई सेवा
चितवन । ‘सिएमसी’ बाट चार लाखबढी बिरामीले सेवा लिदै आएको छ । एकदशकदेखि सेवा दिँदै आएको चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) मा एक वर्षमा चार लाखभन्दा बढी बिरामीले उपचार पाएका छन्। आव २०७५/०७६ मा बहिरङ्ग सेवा (ओपिडी) मा चार लाख ४४ बिरामीलाई सेवा दिइएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. दयाराम लम्सालले सो अवधिमा ३२ हजार ५७६ जनाको आकस्मिक कक्षमा उपचार भएको जानकारी दिएका छन् । आकस्मिक कक्षमा उपचार गराउन आउनेमध्ये ३६ प्रतिशत...
महिनाबारीका बेला विद्यालय छोड्नुपर्ने
नेपालगञ्ज । नेपालगञ्जका अधिकांश विद्यालयमा महिलामैत्री शौचालय नहुनु र भएका शौचालयमा पनि प्याड फेर्न तथा सरसफाइका लागि पानीको अभावका कारण छात्रा चाहेर महिनावारीको समयमा विद्यालय आउँदैनन् । विद्यालय आउन नसक्ने बाध्यताका कारण उनीहरुको अध्ययन प्रभावित हुने गर्छ भने मानसिक पीडाले पनि छात्रालाई पिरोल्ने गरेको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा ४३ सामुदायिक विद्यालय छन् । नगर क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्राको सङ्ख्या करीव छ हजार रहेको छ । “महिनावारी भएका समयमा कपडा फेर्न...
गोरोपन ल्याउने घरेलु उपाय
प्राय: धेरै व्यक्तिलाई गोरो बन्ने रहर हुन्छ । बजारमा गोरो बनाउने अनेक क्रिम तथा पाउडरहरु पाइन्छन्। धेरै पैसा खर्चेर ती क्रिमको प्रयोग गरेपनि गोरोपना पाउन सक्दैनन्। तर, गोरो बन्न क्रिम नै लगाउनुपर्छ भन्ने छैन। हामीसँग भएकै घरेलु उपायको प्रयोगबाट छालामा निखार ल्याउन सक्छौं। गोरोपन ल्याउन यस्ता घरेलु उपाय अपनाउन सकिन्छः महः महमा हुने भिटामिनले छाला गोरो बनाउन मद्दत गर्छ। अनुहारमा मह लगाएर २ मिनेट जति मसाज गर्ने र करिब १५ मिनेटपछि मनतातो पानीले...
नाङ्गै खाना खाने रेष्टुरेन्ट !
एजेन्सी । बजारीकरण र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको चरमरुप भन्दा फरक नपर्ने एउटा उदाहरणको रुपमा लण्डनको बुनयादी रेष्टुरेन्टलाई लिन सकिन्छ । लण्डनको केन्द्रमा रहेको अग्लो टावरहरुमध्येको एक दि सेयर्डबाट केहि गल्ली पार गरेपछि पुगिने यो रेष्टुरेन्ट लण्डनको पहिलो नाङ्गो रेष्टुरेन्ट बन्न पुगेको छ । यो रेष्टुरेन्टमा ग्राहकले बाँसले बारिएको सानो कोठामा बाँसकै टेबुलमा नांगै साथीसँग बसेर अरगानीक खाना खान पाउँछन् । बाहिरबाट हेर्दा यो रेष्टुरेन्ट खासै भव्य देखिँदैन , झ्यालहरु बन्द गरेर भित्र...
दिमाग कमजोर बनाउने गलत बानी
बुटवल । तपाईंको दैनिक जीवनयापनको कारण दिमाग कमजोर भइरहेको हुन्छ । सामान्य लाग्ने कतिपय बानीव्यवहारले मानिसको मस्तिष्कमा नराम्रो असर पारिरहेको हुन्छ । यो समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै जाने र अन्तमा दिमागमा खतरनाक समस्या पैदा हुने विभिन्न अनुसन्धानमा देखाइएको छ । मानिसका केही यस्ता बानी छन् जसले उनीहरुको दिमागमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेका छन्ः खानपानमा लापरवाही- व्यस्तताका कारण कतिपय मानिसहरु खाना समयमा नखाने, अस्वस्थ खाना खाने गरिरहेका हुन्छन् । जसले शरीर मात्र होइन दिमाग पनि...
पोखरा । लायन्स क्लब अफ पोखरा मिडटाउन र वाराही टाउनले संयुक्तरूपमा कास्कीको माछापुच्छे गाउँपालिका–३ घाचोकस्थित परियारटोलका १२ दलित घरपरिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । सो टोलका गरीब तथा विपन्न अवस्थाका उनीहरुको स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले एक वर्षको बीमा गराएको हो । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रामजीप्रसाद बरालले स्थानीय सुरेश परियारलाई बीमाकार्ड हस्तान्तरण गर्दै ‘सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल’ निर्माणको अभियानलाई सफल बनाउन सङ्घसंसस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गरे । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र...
चाया–पोतो हटाउने घरेलु उपाय
बुटवल । अनुहारमा आएको कालो दागलाई सामान्य भाषामा चाया वा पोतो भनिन्छ । विभिन्न कारणले अनुहारमा चाया वा पोतो आउन सक्छ । घामको किरणको असर तथा भिटामिन सीको कमीले पनि चाया–पोतो आउने गर्छ ।यो समस्या महिला र पुरुष दुवैमा देखिन सक्छ । अनुहारमा चाया अथवा पोतो आउनु सबैभन्दा बढी पिरलो मानिन्छ । घरेलु उपचारबाट अनुहारमा आएको चाया–पोतो साइड इफेक्टविना नै हटाउन सकिन्छ । उपचारले मात्र चाया–पोतो हट्न असम्भव हुन सक्छ । सकेसम्म तनाव व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यस्तै, घामबाट बच्न तथा पानी...
काठमाडौं  । विभिन्न कारणले गर्दा हाम्रो आँखामा डार्क सर्कल बस्ने गर्छ । आँखाको वरिपरि कालो धब्बा बस्नुलाई डार्क सर्कल भनिन्छ । डार्क सर्कलले हाम्रो अनुहारको सुन्दरतालाई मात्रै असर गर्दैन, रोगी पनि बनाउँछ । डार्क सर्कल आउनुका विभिन्न कारण हुन्छन् । जस्तै, पेटको समस्या र अनिदोका कारण पनि हाम्रो आँखामा डार्क सर्कल बस्न सक्छ । सामान्य कारणले आँखामा डार्क सर्कल बस्दा हामी घरायसी उपाय पनि अपनाउन सक्छौँ । डार्क सर्कल हटाउन केहि घरायसी उपाय आवश्यक सामग्री एक–एक चिया चम्चा टमाटर र...
बुटवलमा काठमाडौँ हेल्थ केयरको शुभारम्भ
बसन्त आचार्य बुटवल । प्रदेश नं. ५ को अस्थायी राजधानी बुटवलको मैत्रीपथमा आज शनिवारबाट काठमाडौँ हेल्थ केयरहको शुभारम्भ हुने भएको छ । हेल्थ केयरको आज एक कार्यक्रमका बीच प्रदेश नं.५ का सांसद चेतनारायण आचार्य र बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख गोमादेबी आचार्यले शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । शुभारम्भको अबसरमा आज निःशुल्क सुगर परिक्षण ,थाइराइड परीक्षण, एक्सरे तथा भिडियो एक्सरे लगायत सम्पूर्ण उपचारमा छुटको ब्यवस्था मिलाएको काठमाडौँ हेल्थ केयरका अध्यक्ष कुलचन्द्र पाण्डेले बताउनु...